Cleanfox - သင်၏ Inbox ထဲမှာရှင်းလင်း | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အီးမေးလ် & SMS ကို Apps ကပ » Cleanfox - သင်၏ Inbox ထဲမှာရှင်းလင်း
Cleanfox - သင်၏ Inbox ထဲမှာ APK ကိုရှင်းလင်း
Cleanfox delete နဲ့မလိုချင်တဲ့သတင်းလွှာနှင့်တစ်ကလစ်နှင့်အတူ spam များကိုထံမှနှုတ်ထွက်ဖို့ 100% အခမဲ့ App ဖြစ်ပါတယ်။ Cleanfox အခမဲ့ဆန့်ကျင် spam များကိုဖြစ်ပါသည်။
မလိုချင်တဲ့အီးမေးလ်များ, သတင်းလွှာများနှင့် spam များကိုထံမှနှုတ်ထွက်နှင့်တစ်ကလစ်နှင့်အတူအားလုံးအဟောင်းအီးမေးလ်များကိုဖျက်ပြစ်လိုက်ပါ။
Cleanfox 100% အခမဲ့နှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံသည်။
Cleanfox နှင့်အတူ, သင်တို့သည်လည်းသင်၏မိတ်ဆွေများပံ့ပိုးကူညီခြင်းဖြင့်စစ်မှန်သောသစ်ပင်များစိုက်ပျိုးနိုင်သည်!
ယခုပင်လျှင်အသုံးပြုသူထက်ပို 1,8 သန်းပေါင်းများစွာကယုံကြည်စိတ်ချ!
"Cleanfox နှင့်အတူ, သင်သည်သင်၏စာပုံးနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်သန့်ရှင်းရေးနိုင်ပါတယ်။ သင်တို့အဘို့ကိုပိုအဘယ်အရာကိုတောင်းနိုင် "-? Androidpit
"Cleanfox သင်အလွယ်တကူအားလုံးမလိုချင်တဲ့အီးမေးလ်ကစာရင်းပေးသွင်းမှုများမှနှုတ်ထွက်ခွင့်ပြုထားတဲ့အခမဲ့ app ကိုဖြစ်ပါတယ်။ " - Robingood
"Cleanfox အသုံးပြုသူများအသတင်းလွှာထံမှနှုတ်ထွက်အထောက်အကူပြု app တစ်ခုဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်ဝေးထားပါတယ်" "သန်း 30 ကျော်အီးမေးလ်များကို" သန့်ရှင်း - Tech.eu
Cleanfox spam များကိုနှင့်သတင်းလွှာပိတ်ဆို့ခြင်းအားဖြင့်စာတိုက်ပုံးများစီမံခန့်ခွဲရန်ကူညီပေးသည်ဟာအခမဲ့ spam များကို blocker ဖြစ်ပါတယ်။
Cleanfox နှင့်အတူ, သငျသညျမလိုချင်တဲ့အီးမေးလ်များထဲကနေနှုတ်ထွက်နိုင်ပြီး click တစ်ချက်နှင့်အတူအားလုံးအဟောင်းအီးမေးလ်များကိုဖျက်ပြစ်လိုက်ပါ။
Cleanfox လျင်မြန်စွာရဲ့ inbox (အီးမေးလ်များကို '' ပွင့်လင်းမှုနှုန်းလက်ခံရရှိအီးမေးလ်များ, စသည်တို့ကို၏နံပါတ်) စီမံခန့်ခွဲရန်သတင်းအချက်အလက်များအားဖြင့်သင်တို့ကိုပေးပါသည်။ ဒီတန်ဖိုးရှိတဲ့သတင်းအချက်အလက်နှင့်တစ်ဦးချင်းစီသတင်းလွှာများအတွက်, သငျသညျဖို့ရွေးချယ်နိုင်သည်
•ဟောင်းအီးမေးလ်များကို delete, ဒါမှမဟုတ်
Cleanfox အားလုံးအီးမေးလ်ကိုပံ့ပိုးပေး (ဂျီမေးလ်, Hotmail, Yahoo iCloud မေးလ်, အန်းဒရွိုက်မေးလ် Apple ကမေးလ် etc) နှင့်အတူ, english ဂျာမန်နှင့်ပြင်သစ်အတွက်အလုပ်လုပ်တယ်။
အဘယ်သို့ငါ Cleanfox နှင့်အတူသစ်ပင်များစိုက်ပျိုးနိုင်သလဲ
Cleanfox အထူးလွှဲပြောင်း program နဲ့သူ့ရဲ့သစ္စာအရှိဆုံးအသုံးပြုသူများကိုဆုချဖို့လိုသည်။ အသုံးပြုသူတစ်ဦး Cleanfox အပေါ်မိတ်ဆွေတစ်ဦးကူညီပံ့ပိုးတစ်ခုချင်းစီကိုအချိန်, သူ Sambia အတွက်အပင်တစ်ပင်ကိုစိုက်နိုင်ပါတယ်။ Cleanfox ဇမ်ဘီယာအတွက်သစ်တောပြုန်းတီးမှုဆန့်ကျင်တိုက်ထုတ်နိုင်ဖို့ WeForest ၏တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးကလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဖြစ်ပါတယ်။
အဘယ်သို့ငါ Cleanfox ငါ့ကာဗွန်ခြေရာကိုကျေးဇူးတင်စကားကိုလျှော့ချနိုင်သလဲ
CO10 ၏2ဂရမ်အီးမေးလ်တစ်စောင်၏နှစ်ပတ်လည်ကာဗွန်ခြေရာကိုဖြစ်ပါတယ်။ ထက်ပိုမို 200 သန်းအီးမေးလ်များကိုတိုင်းမိနစ်လှေတျတျောမူနေကြသည်။ အီးမေးလ်များကိုတစ်မိနစ်လျှင် CO2,000 ထက်ပို2တန်ချိန်၏ထုတ်လွှတ်မှုအတွက်တိုက်ရိုက်တာဝန်ရှိသည်များမှာ!
Cleanfox နှင့်အတူ, သင်အလွယ်တကူ click တစ်ချက်နှင့်အတူသင့်ရဲ့ကာဗွန်ခြေရာကိုလျှော့ချနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ယခုအချိန်အထိ Cleanfox အီးမေးလ်များကိုသန်းပေါင်းများစွာ၏အတော်ကြာရာပေါင်းများစွာသန့်စင်ခဲ့ပါသည်။
ဘယ်လို Cleanfox ငွေရှာသနည်း?
Cleanfox ထုတ်လုပ်နှင့်ကုမ္ပဏီများပိုမိုကောင်းမွန်သူတို့ရဲ့ဈေးကွက်ကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်ကူညီနိုင်ရန်အတွက် e-commerce ကိုအပေါ်စာရင်းဇယား commercialises ရာ Foxintelligence ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ Cleanfox ၌စာရင်းပေးသွင်းခြင်းအားဖြင့်, သင်သည်အမည်မသိ panel ကို၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များ၏အဘယ်သူမျှမစီးပွားဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏နည်းပညာသင်၏အမည်ဝှက်ကိုအာမခံနှင့်သင့် privacy ကိုလေးစားပါသည်။ Cleanfox 100% GDPR လိုက်နာဖြစ်ပါတယ်။
အလွယ်တကူအားလုံး spam များကိုနှင့်သတင်းလွှာပိတ်ဆို့ဖို့ယခုအခမဲ့ Cleanfox Download!
Facebook မှာ: www.facebook.com/cleanfox
အားလုံးလှပသောအသစ်အမှတ်တံဆိပ်! Cleanfox တစ်ဦးပြဿနာနှင့်မေးခွန်းများတယ်။
* တစ်ဦးပွတ်ဆွဲနှင့်သင်၏သတင်းလွှာ Sort:
သင့်ရဲ့ inbox ရဲ့သန့်ရှင်းရေးအထိသို့မဟုတ်ဆင်း, ဘယ်ဘက်ကိုကတ်များတွန်း။
သငျသညျ Cleanfox အပေါ်ဖိတ်ခေါ်တိုင်းလူတစ်ဦးအဘို့, ဇမ်ဘီယာထဲမှာတကယ့်သစ်ပင်စိုက်ပျိုးကြတယ်။ မဆိုးသောကြောင့်ဖြစ်သည်မဟုတ်လော
* Foxy မှဟဲလိုပြောရမည်မှာ:
Foxy ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှတ်တံဆိပ်အသစ်ကနည်းနည်းရှိ fox mascot နှင့်တွေ့ဆုံရန်။ သငျသညျအထံတော်သို့အကောင်းတယ်ဆိုရင်သူကပင်သင်သည်သင်၏အီးမေးလ်များနှင့်ဂေဟဗေဒအကြောင်းကိုအေးမြပစ္စည်းပစ္စယကိုပြောပြလိမ့်မည်။
Cleanfox - သင်၏ Inbox ထဲမှာရှင်းလင်း
20.72 ကို MB